DMP एकीकरण: प्रकाशकहरूको लागि डाटा-चालित व्यवसाय | Martech Zone
तेस्रो-पक्ष डेटाको उपलब्धतामा मौलिक कटौतीको अर्थ व्यवहार लक्ष्यीकरणको लागि कम सम्भावनाहरू र धेरै मिडिया मालिकहरूको लागि विज्ञापन राजस्वमा खस्कन्छ। घाटा अफसेट गर्न, प्रकाशकहरूले प्रयोगकर्ता डेटा पहुँच गर्न नयाँ तरिकाहरूको बारेमा सोच्न आवश्यक छ। डाटा व्यवस्थापन प्लेटफर्मलाई काममा लगाउनु एक तरिका बाहिर हुन सक्छ।
अर्को दुई बर्षमा विज्ञापन बजारले तेस्रो-पक्ष कुकीहरू फेर्नेछ, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्ने, विज्ञापन ठाउँहरू प्रबन्ध गर्ने, र ट्र्याकिंग अभियानहरूको परम्परागत मोडेललाई बदल्छ।
वेबमा, तेस्रो-पक्ष कुकीहरू मार्फत पहिचान भएका प्रयोगकर्ताहरूको सेयर शून्य तिर प्रवृत्ति हुन्छ। क्रस-साइट ब्राउजर ट्र्याकिंगको परम्परागत मोडेल तेस्रो-पक्ष डेटा प्रदायक र पुनर्विक्रेताहरू द्वारा छिट्टै अप्रचलित हुनेछ। यसैले, पहिलो-पार्टी डाटाको महत्त्व बढ्नेछ। उनीहरूको आफ्नै डेटा संकलन क्षमताहरू बिना प्रकाशकहरूले ठूलो अवरोधहरूको अनुभव गर्नेछन्, जबकि उनीहरूको प्रयोगकर्ता क्षेत्रहरू स collect्कलन गर्ने व्यवसायहरू यस नयाँ विज्ञापन ल्यान्डस्केपको पुरस्कारहरू कटनी गर्न अद्वितीय स्थितिमा छन्।
प्रथम-पार्टी डेटा स Collect्कलन र प्रबन्धले प्रकाशकहरूको लागि उनीहरूको आम्दानी बढाउन, सामग्री अनुभव सुधार गर्न, सment्लग्नता, र वफादार निम्नको निर्माणमा अनुपम अवसरहरू सिर्जना गर्दछ। फर्स्ट-पार्टी डाटाको उपयोग सामग्री को निजीकरण र वेबसाईटहरूको क्रस प्रमोशनको लागि विज्ञापन सन्देश टेलरिंगको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Business Insider ले यसको पाठकहरूको प्रोफाइल विकास गर्न व्यवहार डाटा प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि त्यस जानकारीलाई ईमेल न्यूजलेटरहरू र अनसाइट सामग्री सिफारिशहरूलाई व्यक्तिगत बनाउन व्यक्तिगत पाठकहरूलाई राम्रो बनाउन प्रयोग गर्दछ। यी प्रयासहरूले उनीहरूको विज्ञापन क्लिक-थोरै दरहरू %०% ले वृद्धि गर्‍यो र उनीहरूको ईमेल न्यूजलेटरहरूमा क्लिक दरहरू बढावा दिए 150% द्वारा.
किन प्रकाशकहरूलाई DMP चाहिन्छ
अनुसार Admixer आन्तरिक तथ्या .्क, औसत मा, विज्ञापन बजेटको १२% दर्शकहरूलाई लक्षित गर्नको लागि पहिलो-पार्टी डाटाको अधिग्रहणमा खर्च गरिन्छ। तेस्रो-पक्षीय कुकीहरूको उन्मूलनको साथ, डेटाको माग बढ्दो रूपमा वृद्धि हुनेछ, र पहिलो-पार्टी डेटा स collect्कलन गर्ने प्रकाशकहरू लाभ लिनको लागि आदर्श स्थितिमा छन्।
यद्यपि, तिनीहरूलाई भरपर्दो आवश्यक हुनेछ डाटा व्यवस्थापन प्लेटफर्म (DMP) डाटा संचालित व्यापार मोडेल लागू गर्न। DMP तिनीहरूलाई प्रभावी ढंगले आयात, निर्यात, विश्लेषण, र, अन्तमा डाटा मुद्रीकरण गर्न अनुमति दिनेछ। पहिलो-पार्टी डेटा विज्ञापन सूची अझ सुदृढीकरण र आय को एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान गर्न सक्दछ।
DMP प्रयोग केस: सिम्पलहरू
सिम्पल्स मोल्डोभाको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन मिडिया घर हो। नयाँ भरपर्दो राजस्व स्ट्रिमहरूको खोजीमा, तिनीहरू DMP का साथ साझेदारी गरीयो पहिलो-पार्टी डाटा संग्रह र 999.md का लागि प्रयोगकर्ता एनालिटिक्स सेट अप गर्न, मोल्डाभियन ई-वाणिज्य प्लेटफर्म। नतिजाको रूपमा, उनीहरूले 500०० दर्शक क्षेत्रहरू परिभाषित गरे र अब तिनीहरूलाई प्रोग्रामिंगमा DMP मार्फत विज्ञापनदाताहरूलाई बेच्दछन्।
DMP प्रयोग गर्नाले विज्ञापनकर्ताहरूका लागि थप डाटा तहहरू प्रदान गर्दछ, जबकि प्रदान गरिएको प्रभावहरूको गुणस्तर र सीपीएम बढावा। डाटा नयाँ सुन हो। आउनुहोस् प्रकाशकहरूको डाटालाई व्यवस्थित गर्ने र प्रविधिक प्रदायक छनौट गर्ने मुख्य पक्षलाई विचार गर्नुहोस् जुन विभिन्न प्रकारका प्रकाशकहरूको व्यवसाय आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
DMP एकीकरणको लागि कसरी तयारी गर्ने?
तथ्यांक संकलन - र सबैभन्दा पहिला, प्रकाशकहरूले योजनाबद्ध रूपमा उनीहरूको प्लेटफर्महरूमा सबै डाटा संग्रहको परीक्षण गर्न आवश्यक छ। यसले वेबसाइटहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा दर्ता, Wi-Fi नेटवर्कमा साइन-इनहरू, र अन्य कुनै पनि उदाहरणहरू समावेश गर्दछ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत डाटा छोड्न प्रोत्साहित गरिन्छ। जहाँसुकै डाटा जहाँसुकै आउँदछ, यसको स and्ग्रह र भण्डारणको अवस्थित कानूनी फ्रेमवर्कको पालना गर्नुपर्दछ GDPR र CCPA। प्रत्येक पटक प्रकाशकहरूले व्यक्तिगत जानकारी स gather्कलन गर्दा उनीहरूले प्रयोगकर्ताको सहमति लिनु पर्छ, र तिनीहरूलाई अप्ट आउटको सम्भावनाको साथ छोड्नुहोस्।
डाटा प्रोसेसिंग - DMP जहाज गर्नु अघि, तपाईंले तपाईंको सबै डाटालाई प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ, यसलाई एक एकल ढाँचामा मिलाप गर्नुहोस्, र नक्कलहरू हटाउनुहोस्। डाटाको लागि एक समान ढाँचा सेट गर्न, यो एक महत्त्वपूर्ण अद्वितीय पहिचानकर्ता छनौट गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जसको आधारमा तपाईं आफ्नो डाटाबेस संरचना गर्नुहुन्छ। एउटा छनौट गर्नुहोस् जुन प्रयोगकर्तालाई सजिलै पहिचान गर्न सक्दछ, जस्तै फोन नम्बर वा ईमेल। यो एकीकरण पनि सजिलो हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो डाटालाई सेगमेन्टमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने दर्शकहरूको आधारमा विभाजन गर्नुहुन्छ।
कसरी DMP एकीकृत गर्ने?
DMP लाई जोड्ने सब भन्दा प्रभावकारी तरीका मध्ये एक हो यो एपीआई मार्फत CRM को साथ एकीकृत गर्नुहोस्, सिique्क्रोनाइज गर्दै यदि तपाईंको सीआरएम तपाईंको सबै डिजिटल सम्पत्तीहरूको साथ एकीकृत गरिएको छ भने, यसले स्वतः DMP लाई डाटा पास गर्न सक्दछ, जसले समृद्ध बनाउन र बढाउन सक्दछ।
DMP प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत पहिचान योग्य जानकारी राख्दैन। जब डीएमपी एपीआई वा फाइल आयात मार्फत एकीकृत हुन्छ, यसले डाटाको बन्डल प्राप्त गर्दछ जुन प्रकाशक आईडी कनेक्ट गर्दछ अद्वितीय प्रयोगकर्ता पहिचानकर्ताको साथ तपाईं अघिल्लो चरणमा परिभाषित गर्नुभयो।
CRM को माध्यमबाट एकीकरणको लागि, तपाईं ह्याश ढाँचामा डाटा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। DMP ले यो डाटा डिकोड गर्न सक्दैन, र यसलाई यस ईन्क्रिप्टेड ढाँचामा प्रबन्ध गर्ने छ। DMP प्रयोगकर्ता डेटा को गोपनीयता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ, जब सम्म तपाईं पर्याप्त अज्ञातकरण र एन्क्रिप्शन लागू गर्नुभयो।
DMP को कुन प्रकार्य हुनु पर्छ?
तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम DMP चयन गर्न, तपाईंले प्रविधि प्रदायकको लागि तपाईंको आवश्यकताहरू परिभाषित गर्न आवश्यक छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईले सबै आवश्यक प्राविधिक एकीकरणहरूको सूची बनाउनु पर्छ।
DMP ले तपाईंको प्रक्रियाहरूलाई बाधा पुर्‍याउँदैन र अवस्थित टेक्निकल पूर्वाधारको वरिपरि काम गर्न आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं संग पहिले नै एक CRM प्लेटफर्म, CMS, र माग पार्टनरहरु संग एकीकरण छ, छनौट DMP सबै संग संगत हुनु पर्छ।
डीएमपी छनौट गर्दा, यसका सबै अवस्थित टेक्निकल क्षमताहरूलाई ध्यानमा राख्नुहोस्, ताकि एकीकरण तपाईंको प्राविधिक टीमको लागि बोझ नहुन सक्छ। तपाइँलाई एक प्लेटफर्म आवश्यक छ कि प्रभावी ढ the्गले कुञ्जी कार्यक्षमता प्रदान गर्दछ: स collection्कलन, विभाजन, विश्लेषण, र डाटा को मुद्रीकरण।
ट्याग प्रबन्धक - तपाईंको DMP मा तपाईंको अवस्थित डाटा एकीकृत गरेपछि, तपाईंले अगाडि डाटा पोइन्टहरू संकलन गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यसो गर्नका लागि तपाईले आफ्नो वेबसाइटहरूमा ट्याग वा पिक्सेल सेट गर्नु पर्छ। यी कोडका तारहरू हुन् जुन तपाईंको प्लेटफर्महरूमा प्रयोगकर्ता व्यवहारको बारेमा डेटा स collect्कलन गर्दछन् र तिनीहरूलाई DMP मा रेकर्ड गर्दछ। यदि पछिल्लो छ भने ट्याग प्रबन्धक, यो तपाईंको प्लेटफर्ममा केन्द्रिय रूपमा ट्यागहरू ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनेछ। वैकल्पिक भए पनि, यसले तपाईंको प्राविधिक टोलीलाई धेरै समय र प्रयास बचत गर्नेछ।
विभाजन र वर्गीकरण - तपाईको DMP सँग डाटा विभाजन र विश्लेषणका लागि बिभिन्न सुविधाहरू हुनुपर्दछ। यसले वर्गीकरण स्थापना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ, एउटा रूख-जस्तो डाटा संरचनाले तपाईंको डाटा खण्डहरू बीचको अन्तरक्रिया वर्णन गर्दछ। यसले DMP लाई डाटाको संकुचित खण्डहरू पनि परिभाषित गर्न सक्दछ, तिनीहरूलाई गहिरो विश्लेषण गर्दछ, र तिनीहरूलाई उच्च मूल्या .्कन गर्दछ।
CMS एकीकरण - डीएमपीको अधिक उच्च-स्तर सुविधा तपाईंको वेबसाइट सीएमएसको साथ यसलाई एकीकृत गर्ने क्षमता हो। यसले तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइटमा गतिशील सामग्री अप्टिमाइज गर्न र तपाइँको प्रयोगकर्ताको आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुमति दिनेछ।
मुद्रीकरण - तपाइँ DMP एकीकृत पछि, तपाइँले डिमांड साइड प्लेटफर्म (DSP) मा थप मुद्रीकरणको लागि डेटा कसरी सक्रिय गर्ने सिक्नु आवश्यक छ। DMP छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाइँको माग पार्टनरहरूसँग सजीलै एकीकृत गर्न सकिन्छ।
केहि डीएसपीले नेटिभ डीएमपी प्रस्ताव गर्छन्, कडाईका साथ आफ्नो पारिस्थितिकी प्रणालीमा एकीकृत। यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि एकल DSP मा एकीकृत DMP एक प्रभावकारी समाधान हुन सक्छ, तपाइँको बजारको स्थिति र प्रतिस्पर्धी परिदृश्यमा निर्भर गर्दै।
यदि तपाईं सानो बजारमा काम गर्नुहुन्छ भने, जहाँ एक विशेष डीएसपी एक प्रमुख खेलाडी हो, तिनीहरूको नेटिभ DMP प्रयोग गर्नु स्मार्ट चाल हुन सक्छ। यदि तपाईं ठूलो बजारमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ध्यान दिन आवश्यक छ कि कसरी सजीलो डीएमपी प्रमुख माग प्लेटफर्महरूसँग एकीकृत गर्न सक्दछ।
विज्ञापन सर्भर एकीकरण - अर्को महत्त्वपूर्ण सुविधा तपाईंको आफ्नै डाटा प्रयोग गर्ने क्षमता हो। धेरै प्रकाशकहरूले एजेन्सीहरू र विज्ञापनदाताहरूसँग कार्य गर्न विज्ञापन सर्वरको उपयोग गर्दछन्, उनीहरूको विज्ञापन अभियानहरू सुरू गर्छन्, क्रस-प्रमोट गर्दछन् वा बाँकी ट्राफिक बिक्री गर्दछन्। यसैले, तपाइँको DMP लाई तपाइँको विज्ञापन सर्भरसँग सजिलैसँग एकीकृत गर्न आवश्यक छ।
आदर्श रूपमा, तपाईंको विज्ञापन सर्वरले तपाइँको सबै प्लेटफर्महरू (वेबसाइट, मोबाइल अनुप्रयोग, आदि) मा विज्ञापन सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र तपाइँको सीआरएमको साथ डेटा आदानप्रदान गर्दछ, जसले बारीमा, यसलाई DMP सँग सञ्चार गर्दछ। त्यस्ता मोडलले तपाईंको सबै विज्ञापन एकीकरणहरूमा उल्लेखनीय सरलीकरण गर्न सक्दछ, र तपाईंलाई मोनेटाइजेशन ट्र्याक गर्न दिन्छ। जे होस्, यो सँधै केस हुँदैन, र तपाइँले DMP ले तपाइँको विज्ञापन सर्भरसँग सजिलैसँग काम गर्दछ भनेर सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँले छनौट गर्नुभएको प्रविधि प्रदायकले ग्लोबल प्राइभेसी र डेटा सुरक्षा नियमहरू पालना गर्दछ। जहाँसम्म तपाईं स्थानीय बजारबाट डाटामा विशेष ध्यान दिनुहुन्छ भने, तपाईं अझै पनि विश्वको कुनै पनि भागबाट प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय विज्ञापनदाताहरू र साझेदारहरूसँग DMP प्रदायकको सम्बन्ध हो। स्थापित साझेदारीको साथ एकीकृत पूर्वाधारमा सम्मिलित हुन तपाईंको प्लेटफर्महरूको एकीकरण सजिलो बनाउन र तपाईंको डिजिटल सम्पत्तिहरूको मुद्रीकरण स्ट्रिमलाइन गर्न सक्दछ।
यो एक टेक्नोलोजी पार्टनर छनौट गर्नको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ जसले तपाईंलाई पूर्ण स्व-सेवा इन्टरफेस प्रदान गर्दैन तर तपाईंलाई व्यावहारिक मार्गदर्शन, प्रतिक्रिया, र परामर्श प्रदान गर्दछ। शीर्ष निशान ग्राहक सेवा कुनै पनि समस्या निवारण गर्न र तपाईंको डाटा प्रबन्धन रणनीतिहरू टेलर गर्न अनिवार्य छ।
टैग: admixeradtechक्रस-साइट ब्राउजि।ग्राहकसंगको सम्बन्ध व्यवस्थापनतथ्यांक संकलनगतिशील सामग्री अनुकूलनपहिलो पार्टी डेटामुद्रीकरणनिजीकृत ईमेलहरूलक्ष्यीकरणवर्गीकरणतेस्रो-पार्टी डाटा